दाँत पहेँलो छ ? उसोभए दुई मिनेटमै चम्किलो बनाउन यो उपाय अपनाउनुहोस् ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौँ । अहिलेको जेनरेसनमा पहेलो दांत हुनु सामान्य कुरा हो यो आज धेरै को समस्या पनि भएको छ। सहि तरिकाले दांत को हेरचाह नगर्नु, पराग, सुर्ती दात पहेलो हुँदा आफ्नो अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउने मात्र होइन।
धेरैको आत्मा बिश्वाश पनि घटेको देखिएको छ। आज हामि तपाइलाई दातको पहेलोपन हटाउने सजिलो तरिका हरु बताउने छौ। के हुन् त ती तरिका आउनुहोस् जानिराखौ :
१.तुलसीमा दांतको पहेलोपन हटाउने एक अद्भुत शक्ति रहेको छ। यसले दाँतमा रहेको पहेलोपन हटाउने मात्र होइन मुख र दात सम्बन्धि अन्य रोगबाट बचाउने काम पनि गर्दछ। तुलसीको पात लाइ घाममा सुकाउने र सुकेपछि यसको पाउडर बनाइ टुथपेस्ट संग मिलाएर ब्रस गर्ने गर्दा दांत को पहेलोपना हटेर चमक आउन थाल्छ।
६.एक कागतीको रस निकालेर त्यसमा जति रस छ त्यतिनै मात्रामा पानि मिसाउनु होस् र खाना खाइ सकेपछि यहि कागती पानीले दिनहु कुल्ला गर्ने गर्नुहोस । यसो गर्दा दाँतको पहेलोपना त हट्छ नै सास गनाउने समस्यामा पनि यो रामबाण सिद्ध छ।
७. स्ट्रबेरी दांत चम्किलो बनाउने सबै भन्दा मिठो र सजिलो उपाए हो । यसमा पाइने मालिक एसिड (Malic acid)ले दांत लाइ सेतो र चम्किलो बनाउछ।
८.केरालाइ पिसेर यसको पेष्ट बनाउनु होस्। यसको पेष्टले दांतलाइ दिनहु एक मिनेट मसाज गर्नुहोस, मसाज पछि दांत ब्रश गर्नुहोस। यो उपाए दिनहु गर्नाले दाँतको पहेलोपन हटेर जान्छ। चुरोटको सेबन गर्ने गर्नाले पनि दांत पहेलो हुन्छ भने कुनै खानेकुरा लगातार खानाले, उमेर बढ्दै जाँदा अनि धेरै औषधिको सेवन गर्नेहरुको पनि दात पहेलो हुन्छ।
अम्बाको दाना भन्दा पातको यति ठूलो महत्व यी सबै रोगको लागि रामवाण औषधि हो ।